Articles tagged 'pj moor'
PJ hopes for Moor runs 17 October 2016 HARARE - On song Zimbabwe batsman PJ Moor takes cognisant of the fact that form is temporary but says his desire is to keep improving and giving fans the joy they deserve. The 25-year-old's most recent innings of 157 from 222 were the hallmark of the first unofficial Test match against Pakista...
PJ seeks MCC membership 30 August 2016 HARARE - Zimbabwe wicketkeeper batsman PJ Moor left for Leeds yesterday to play in his last game for the Marylebone Cricket Club (MCC) this weekend hoping to make a lasting impression to guarantee him full membership status. MCC, founded in 1787, is the world's most active cricket club, which ...
Zim was always my first choice: PJ 15 November 2014 HARARE - Uncapped batsman PJ Moor says it has always been a “goal” to play for Zimbabwe despite earlier links with Ireland. The Harare-born rising star leaves the country today to join the Zimbabwe ODI squad for the five-match series against Bangladesh, which starts after the completion of the...
Zim's Moor targets Ireland call-up 5 March 2013 HARARE - Zimbabwean all-rounder PJ Moor has set his sights on an Ireland call-up following his latest spell in that country s domestic league. The 22-year-old from Harare reportedly qualified for the ICC Associate member country in January. Moor, who captained Zimbabwe at the Under-19 World Cup i...